Kooxda Chelsea oo mutaysan karta ganaax dhibco looga jaranayo + Sawirro – Gool FM
(London) 12 Dis 2016 – Kooxda Chelsea ayaa wajahaysa suurta galnimo ay ku mutaysan karto in dhibaha horyaalka qaar laga jarto kaddib dagaalkii gegada Etihad.
Naadiga Stamford Bridge iyo kooxda ay coltamaan ee Manchester City – ayaa waxaa labadaba dacwo u qaba xiriirka Ingiriiska ee FA-ga, kaddib markii ay labada kooxi ay ku fashilmeen inay xakameeyaan xiddigohooda, iyadoo uu dagaal qarxay kaddib markii uu Sergio Aguero uu taako xaasidnimo ah usoo kacay daafaca Blues ee David Luiz.
Aguero iyo laacibka khadka dhexe uga dheela Man City ee Fernandinho ayaa garoonka laga eryey, balse dagaalka ayaa waxaa ku lug lahaa ku dhowaad 22-ka laacib ee garoonka ku jirtey, qaar ka mid ahaa kaydka, iyo xitaa qaar ka mid ah shaqaalaha labada kooxood.
Yeelkeede, waa markii SHANAAD muddo 19 bilood ah ee Chelsea lasoo taago wejiga guddiga anshaxa iyadoo lagu haysto inay ku tunteen xeerka loo yaqaanno FA Rule E20 oo ku saabsan hab-dhaqanka ciyaartooyda.
Kooxda Londoners-ka ayaa dembiga lagu helay lagana abaal mariyay 4 jeer oo hore, taasoo keentay inuu warsidaha Sunday Mirror Sport uu sheego in ay haatan halis ugu jiraan inay noqdaan naadigii ugu horreeyay ee heerka 1-aad ee muddo 26 sano ah dhibco laga jarto kaddib Arsenal iyo Manchester United oo dhibco looga goostay anshax xumo.
Kaddib guushii shalay, Chelsea oo rikoodh cusub u dhigtay Premier League